Ogaden News Agency (ONA) – Sargaal Tigrey Ah oo Khamriga Ka Ganacsan Jiray oo Lagu Dilay Duleedka Buuhoodle
Sargaal Tigrey Ah oo Khamriga Ka Ganacsan Jiray oo Lagu Dilay Duleedka Buuhoodle
Posted by Dayr	/ July 13, 2016
Wararka naga soo gaadhaya xuduuda u dhaxaysa wadanka Somalia iyo Ogadenia ayaa sheegaya in lagu dilay magaalada Buuhoodle sargaal u dhashay qoomiyada Tigrey. Sargaalkan ayaa lagusoo waramayaa in lala dilay darawalkiisii oo asaguna Tigrey ahaa.
Dilkan ayaa waxa uu dhacay shalay oo Talaado ahayd galinkii hore waxaana toogashada gaystay sida ay sheegeen dadka degaanku ee ku sugnaa goobta dilku ka dhacay nin dhalinyaro ah oon la aqoonsanin haybtiisa, sargaalkan ladilay ayaa gudaha usoo galay qiyaastii 3 KM xuduuda u dhaxaysa wadanka Somalia iyo Ogadenya, wuxuuna waday sida lasheegay wax yaabaha maandooriyaha ah sida khamriga oo uu ka ganacsan jiray.
Dhanka kale waxaa gabi ahaanba laxidhay xuduuda udhaxaysa Ogadenia iyo Somalia waxaana goobta yimid ciidamada gumaysiga Itoobiya ee Woyaanaha kuwaasoo isku gadaameen goobtii lagu dilay sargaalka Itoobiyaanka ah.
Macadda sababta loo dilay ninkan iyo cidda falkan ka dambaysay toona. Wixii kasoo kordha dhacdadan waxaad ka heli doontaan wararkaanaga dambe haduu ilaahay yiraahdo ee hamoogaanina ONA.